श्री स्वस्थानी ब्रत कथाको पुरा भाग हेर्नुहोस :स्वस्तानी माताले हामी सबैको रक्षा गरुन् ! श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (१ देखि ३१ औं आध्याय)
श्री स्वस्थानी ब्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठीन ब्रतको पर्व हो । यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमा सम्म १ महिना चल्दछ । यो ब्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ । सत्य युगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानी ब्रत बसेको र चिताएको पुरा भएको विश्वासमा श्रीस्वस्थानी
हे भगवान यस्तो कसरी भयो ? करेन्ट लागेको छोरालाइ बचाउन आमा डाको छोडेर रुदै मिडियामा ! सेयर गर्नुहोला
झापा दमक निवासी भिम मगर नाम गरेका युवालाई घर बनाउने काम गर्दा करेन्ट लागेर बिराटनगर स्थित म्याक्स अस्पतालमा लागिएको छ । सामान्य मजदुर काम गर्ने युवालाइ उपचार गर्न घरको आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका कारण बुढी आमाले रुदै रुदै सबैलाई गुहार माग्नुभएको छ । सामान्य परिवारका भिम मगर अहिले ४० बर्षका
ज्योतिषशास्त्रबाट मानिसको भूत, भविष्य र वर्तमानको फलादेश गरिन्छ । उसको जन्म समयलाई आधार मानेर जन्म कुण्डली तयार पारिन्छ । जन्म कुण्डलीमा बसेका ग्रहकोप्रभाव स्वरुप उसमा देखिने भूत, वर्तमान र भविष्यको फलादेश गरिन्छ । त्यसो त हरेक मानिसका राम्रा र कमजोर पक्षहरु हुन्छन् । कतिपय कुराहरुको विषयमा आफू जानकार नभएर पनि
शुक्रबारको दिन माता सन्तोसीको यसरि गर्नुहोश पुजा ! मातालाई खुसि पार्ने यसरि गर्नुस पुजा
हिन्दु धर्म अनुसार सन्तोषी माताको पुजा चाही शुक्रबार शुक्रबार गरिन्छ । हिन्दु सस्कार अनुसार धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरु बार अनुसार विभिन्न देवी देवताको नाममा ब्रत बस्ने तथा पूजा आराधना गर्ने गर्दछन् । आज शुक्रबार । शुक्रबारबारका दिन सन्तोषी माताको वर्त बस्ने गरिन्छ । सन्तोषी मातालाई हिन्दु धर्ममा सन्तोष, सुख, वैभवकी
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन छ । साथीभाइ, बन्धुवान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ । अविवाहितहरूमा विपरीतलिङ्गीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । परिश्रमका माध्यमबाट आम्दानी बढ्नेछ । दिउँसोबाट राज्यभावमा चन्द्रमा जाने भएकाले सामाजिक र सरकारी
पाँच दिनपछि उनको विवाह हुँदै थियो । घरमा सामान जुटाउने र निम्तो बाँड्ने चटारो थियो । आफ्नो बिहेको निम्तो साथीहरूलाई दिन रमिता भट्ट कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको जनज्योति टोल गएकी थिइन् । रमिताले साथीहरूलाई निम्तो त बाँडिन्, तर बिहे हुन पाएन । निम्तो बाँडेर महेन्द्रनगर बजारतर्फ फर्किरहेकी उनको बिहीबार साँझ टिपरको ठक्करबाट मृ’त्यु भयो । बैतडीको दशरथचन्द
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल माघ १० गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० जनवरी २४ तारीख माघ कृष्णपक्ष औंसी तिथी उत्तराषाढा नक्षत्र वज योग चतुष्पद करण चन्द्रमा धनु राशिमा ७ः४२ बजे सम्म पश्चात मकर राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग परिधावीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु दर्शश्राद्ध आर्यघाटमा माधव नारायण मेला
कञ्चनपुरमा टि’प्परको ठक्क’रबाट मृ’त्यु भएकी युवतीको सनाखत भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार बैतडीको गुरुखोला घर भई हाल कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्वर १६ गोवरीया बस्दै आएकी २० बर्षीय रमतिा भट्टको मृ’त्यु भएको हो। उनको बिहीबार अपरान्ह टि’प्परको ठ’क्करबाट घ’टना स्थलमै मृत्यु’ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी दिएको
स्वस्तानी माताले हामी सबैको रक्षा गरुन् ! स्वस्थानी ब्रत कथा भाग – १५ सुन्नुहोस् ….( भिडियो सहित)
आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ नेपाली हिन्दू महिला दिदीबहिनीले एक महिनासम्म श्रीस्वस्थानीको ब्रत बस्ने गर्नुहुन्छ । यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना चल्दछ । सत्य युगमा भगवान विष्णुको कृपा अनुसार हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउ भनी श्रीस्वस्थानी व्रत बसेको कथा छ ।व्रतका प्रभावले
आज यी ८ राशिको चम्कियो भाग्य : आज पाथीभरा माताको मन्दिरलाई दर्सन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस ।
मेष दान, पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्ने छ । पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । ज्ञानगुन र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ । बन्दव्यापार फस्टाउने छ । आम्दानीमा कमी हुने छैन । सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । पारमार्थिक काममा खट्नु पर्ने समय छ । धार्मिक÷सामाजिक क्षेत्रमा समय